Ogaden News Agency (ONA) – Xabad-Joojin Ka Dhaqan Gashay Koonfurta Sudan.
Xabad-Joojin Ka Dhaqan Gashay Koonfurta Sudan.
Posted by Dayr	/ December 25, 2017
Xabad joojin ay dhawaan kala saxiixdeen dowladda Suudaanta Koonfureed iyo falaagada hubeysan ayaa ka dhaqan gashay dalkaasi, tallaabadan ayaana ah isku-daygii ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee halakeeyay waddankaasi afartii sano ee lasoo dhaafay.
Heshiiska xabad joojinta ah ayaa dowladda Suudaanta Koonfureed iyo falaagada dagaalka kula jirta waxa ay ku kala saxiixdeen maalintii Khamiistii dalka Ethiopia. Heshiiskan ayaa dhigaya in hey’ddaha gargaarka loo ogolaado in ay gurmad gaadhsiyaan dadka ay waxyeeladu kasoo gaadhay colaada ka jirtay waddankaasi.
Dhowr heshiis oo horay loo saxiixay ayaa burburay, waxaana dagaalka sokeeye ee dalkaasi lagu dilay tobonaan kun oo qof, halka malaayiin kalana ay ku barakaceen. Dhammaan isku-dayadii hore ee lagu doonayay in lagu gaadho heshiis nabadeed oo dhexmara madaxweyne Salva Kiir iyo ninka sida weyn uga soo horjeedo Riek Machar ayaa guuldareystay.
In ka badan hal malyan oo qof oo u dhalatay Suudaanta Koonfureed ayaa u qaxay dalalka dariska la ah, iyada oo hay’addaha gargaarkuna ay ka digeen cuna yari ba’an. Xabad joojintan ayaa ka dhigan tallaabadii ugu horreysay oo lagu guuleysto, waxaana xigi doono wadahadalo kale oo hadii guul laga gaadho ugu dambeyn la qaban doona doorashooyin.